छुटाउनु भयो कि ? – Page3– Nepali Health
May 14, 2020 May 15, 2020 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, १ जेठ । अस्पतालमा भर्ना भएकी ६ बर्षीया बालिकालाई कारोना भाइरस (कोभिड – १९) संक्रमण भएको पाइएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालले उनको उपचारमा खटिएका चिकित्सक, नर्स सहित अन्य सम्पर्कमा रहेका ३८ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ । अस्पतालले उनीहरुको आजै थ्रोट स्वाब संकलन गरी पीसीआर विधिबाट परीक्षणका लागि पठाउने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौँ, १ जेठ । महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका एक जना विरामीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा न्युरो सर्जरी वार्डमा गत मंगलबार भर्ना गरिएकी ६ बर्षिया बालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो ।
कोरोना अपडेटः विश्वभर २ लाख ४८ हजारको मृत्यु, सार्कमा कति ?
May 4, 2020 May 5, 2020 Nepali Health Comment
जेनेभा, २२ वैशाख । कोरोनाभाइरसका कारण विश्वभर २ लाख ४८ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ३५ लाख ६८ हजार नाघेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग र औषधि व्यवस्था विभागलाई सीडीसी र एफडीए मोडलमा परिवर्तन गर्ने तयारी
काठमाडौँ, २२ बैशाख । सरकारले स्वास्थ्य सेवा विभाग र औषधि व्यवस्था विभागको बर्तमान संरचनालाई परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण आज मात्रै ११ जनामा, कुल संक्रमितको संख्या ४२ पुग्यो
April 21, 2020 April 22, 2020 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, ९ बैशाख । कोरोना भाइरस (कोभिड१९)को संक्रमण आज मात्रै १० वटा पोजेटिभ देखिएको छ । सबै संक्रमित उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका भुल्केस्थित मस्जित वरपरका स्थानीय हुन् । यो संगै कुल संक्रमितको संख्या ४१ पुगेको छ ।
April 17, 2020 April 18, 2020 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, ५ बैशाख । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बहरानमा रहेकामध्ये हालसम्म ४९ नेपालीमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिएको त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले पुष्टि गरेको छ ।
पीसीआर र आडीटीबाट साढे १९ हजारमा कोरोना परीक्षण, संक्रमित १६ जना
April 16, 2020 April 17, 2020 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, ४ बैशाख । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने अभियानमा लागेको सरकारले पछिल्ला दिनमा परीक्षणको दायरा बढाएको बताएको छ ।
कोरोनाविरुद्ध ७० बढी खोपको विकास हुँदै, ३ वटा क्लिनिकल ट्रायलमा : डव्लुएचओ
जेनेभा । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डव्लुएचओ)ले कोरोना भाइरसविरद्ध प्रयोग कम्तीमा ७० वटा खोपको विकास भइरहेको बताएको छ । त्यसमध्ये ३ वटा खोप क्लिनिकल ट्रायलमा गईसकेको जानकारी दिएको छ ।
कोरोनाविरुद्धको अभियानमा ५० हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरिँदै
April 5, 2020 April 6, 2020 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, २३ चैत । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड१९) विरुद्धको अभियानमा ५० हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने भएको छ । कोभिड – १९ नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्वन्धी उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको १७ औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।